Maamulka G/Sh/Hoose oo ka warbixiyay Qarax Miino oo ay fashiliyeen ciidamada amaanka | Radio Muqdisho
Maamulka G/Sh/Hoose oo ka warbixiyay Qarax Miino oo ay fashiliyeen ciidamada amaanka
Published on January 3, 2013 by Mowliid · No Comments · 948 views
Maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka warbixiyay qarax gelinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose.
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka ee maamulka gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Cabdi ayaa Radio Muqdisho u sheegay in qaraxaasi oo ahaa Miinada Remuudka laga hago oo la dhigay xaafada Villa Rusiya ay ciidamadu fashiliyeen oo ay qarxiyeen.
Sidoo kale guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in Miinadaasi aysan geysan wax Qasaare ah wuxuuna ku amaanay shacabka ku dhaqan xaafadaasi sida wanaagsan oo ay ula shaqeeyeen ciidamada qalabka sida.
Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay dhalinyarada ay marin habaabiyeen Horjoogayaasha shabaab in ay isaga soo haraan mabda’a qaldan oo ay ka dhaadhiciyeen, isagoo ku booriyay in ay dib ula midoobaan qoysaskoodii ay ka irdhoobeen.
Talaabadan ay ciidamadu ku fashiliyeen dhagarta ay maleegayeen shacabka ku dhaqan magaalada Marka ayaa ku timid wada shaqeynta wanaagsan ee u dhaxeysa ciidamada iyo shacabka.